Norway oo soo bandhigtay Tirada Qaxootiga iska dhiibay Dalkeeda Sanadkan kala barkiisa Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaNorway oo soo bandhigtay Tirada Qaxootiga iska dhiibay Dalkeeda Sanadkan kala barkiisa
Norway oo soo bandhigtay Tirada Qaxootiga iska dhiibay Dalkeeda Sanadkan kala barkiisa
July 7, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Norway 1
tiro yar oo magangalyo doon ayaa iska dhibay Norway. Lixdii bilood ee ugu horreysay sanadka 2021.
448 qof ayaa codsaday magangalyo, tirokoobyo cusub oo ka soo baxay Agaasinka Socdaalka ee Norway (UDI) ayaa muujineysa taasi
Suuriya ayaa wali ah kooxda ugu badan, oo leh 199 magangalyo doon ah, waxaa ku xiga Ereteriya (58) iyo Afghanistan (44).
Tirooyinka sanadkaan ayaa kayar kan sanadka 2020. Markii la fiirinayay guud ahaan sanadkii hore, UDI-da waxaa heshay 1,386 codsiyo magangalyo ah, iyadoo 633 kamid ah ay qeybtii hore ee sanadka.
Dhamaadkii Juun, 1,590 qof ayaa ku noolaa xarumaha qaabilaada magangalyada, sida laga soo xigtay tirokoobyada UDI.
Wadar ahaan 4,452 qof ayaa la siiyay codsi midaynta qoysaska dhammaadka bisha Maajo.
Sanadkii 2020, 1,011 qof ayaa la siiyay codsiyo magangalyo. Kooxda ugu badan waxay ka yimaadeen Suuriya, waxayna gaarayaan 413 qof, halka 287 Turki ah iyo 124 Eritrean ah loo ogolaaday inay Norway sii joogaan. Somalida kuma ahan dalkan sidii hore waxana yaraaday tirada iska dhiiba.
Xigasho norway Today
Norwegen way xumaatay wax usoo socdana maleh ilaheydinkiisa dadkii ey dhibtay